Maxay Ahayd Farriinta Ka Timid John Terry Ee Soo Gaadhay Willian Ka Hor Inta Aanu Sida Rasmiga Ah Ugu Biirin Arsenal? - Gool24.Net
Maxay Ahayd Farriinta Ka Timid John Terry Ee Soo Gaadhay Willian Ka Hor Inta Aanu Sida Rasmiga Ah Ugu Biirin Arsenal?
August 12, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Xiddiga reer Brazil ee Willian ayaa helay farriin ka timid saaxiibkiisii hore ee Chelsea ee John Terry, xilli uu isku diyaarinayo inuu heshiis rasmi ah u saxeexo Arsenal oo uu saddex sannadood qalinka ugu duugayo, kaddib markii uu Axaddii shaaciyey inuu ka tegay Chelsea.
Willian oo 11 gool u dhaliyey Chelsea 47 kulan oo uu u saftay xili ciyaareedkan, waxa uu noqon doonaa ciyaartoy si toos ah uga hor yimaadda Blues xili ciyaareedka dambe isaga oo xidhan funaanadda Arsenal, waxaana ka hor inta aanay taasi dhicin ay farriin kasoo gaadhay kabtankiisii hore ee John Terry oo muddo afar sannadood ah ay u wada ciyaareen Blues, ayna ku wada guuleysteen laba horyaal oo Premier League ah.
Terry ayaa barta bulshada ee Istagram, waxa uu nasiib wanaagsan ugu rajeeyey Willian, waxaanu yidhi: “Nasiib wanaagsan Willian. Halyey dhab ah ayaad tahay. Ciyaartoy wanaagsan iyo nin fiican. Waanu ku tebi doonaa geez.”
Willian oo Chelsea u ciyaaray ku dhowaad 350 ciyaarood, waxaana koobabka uu la qaaday ku jiray FA Cup iyo Europa League oo usoo raacay koobabka Premier League.
Kaddib toddobada sannadood ee uu Stamford Bridge ka ciyaaray, waxa uu Willian shandaddiisa ka qaatay Chelsea kaddib markii ay isku khilaafeen heshiis cusub oo ay labada dhinac laba meelood oo kala fog istaageen.
Willian ayaa dalbaday saddex sannadood oo qandaraas ah in la siiyo, halka ay Blues usoo bandhigtay in kaliya laba sannadood ay u ogol yihiin, taas oo keentay inay kala ambobaxaan.
Shalay ayaa la sheegay in Willian uu tijaabada caafimaadka u maray Arsenal oo uu u saxeexayo heshiis waafaqsan sannadihii uu ka dalbaday Chelsea ee saddexda ahaa.